I-Coco Casa-iKhaya eliPhambili eLwandle
Indlu enkulu evulekileyo yaselwandle, amagumbi okulala avaliweyo kunye nefeni kunye neyunithi yeA / C kwindawo nganye. Ifumaneka kunxweme oluhle noluzolileyo lweLas Penitas. Ichibi elisecaleni lolwandle, i-hammock, izitulo ezishukumayo. Iindawo zokutyela kunye nemisebenzi ekufutshane. Ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ukusuka eLeon. Sikhetha iindwendwe ezipholileyo.
Jonga kummkeli ukuba unomdla wokongeza iindwendwe ezongezelelweyo. Iindwendwe ezongezelelweyo aziyi kwamkelwa ngaphandle kogunyaziso lwangaphambili kunye nentlawulo eyongezelelweyo.
Indlu ibonelela nge-40 kwh yonke imihla, ukuba umxhasi udlula loo mali yemihla ngemihla umxhasi uyazibophelela ukuhlawula i-0.50 yeedola nge-Kwh nganye. Umnakekeli uya kuthatha umfanekiso wemitha yombane ngaphambi nangemva kokufika kwakho.
NgeeHolide kukho ubuncinane ubusuku obuyi-04, rhoqo. (IVeki eNgcwele, iKrisimesi, uEva woNyaka oMtsha)
Andizu kufumaneka ngokobuqu kodwa ndisimahla nge-imeyile phantse yonke imihla. UMartha ohlala kweli khaya kodwa owahlukileyo kwiindwendwe uyafumaneka ukuze ancede, akasazi isiNgesi.